”လော်ဥပဒေ” | Dr Ko Ko Gyi's Blog
« ဒီနေ့အချိန်ဟာ တော်လှန်ရေးတရပ်ကို မီးဖွားသန့်စင်ရတော့မဲ့အချိန်…လူ.အသက်တစ်ချောင်းကို တန်ဖိုးမထားတက်တဲ့ အဓမ္မ၀ါဒီတွေ ကြီးစိုးနေတဲ့အမှောင်ခေတ်ကို အဆုံးသတ်ကြဖို့အချိန်ရောက်ပါပြီ။
ဒေါ်အောင်ဆန်းစုကြည် အပါအဝင် ထိပ်တန်းခေါင်းဆောင်များ တွေ့ဆုံမည် »
(လော်တိုင်းပြည်)ဟာ ဘယ်သူ့ ကိုမှ နစ်နာ စေလို တဲ့စိတ်နဲ့ ရေး တာ မဟုတ် ပေမယ့် ပရဟိတအကျိုးတော် ဆောင်တွေကတော့ ကြိုက်ပုံမရဘူး။ မင်းဗုဒ္ဓဘာသာ မဟုတ်ဘူးလားတဲ့။
စတိတ်ရှိုးတွေဆူညံနေတာ ဘာပြော မလဲတဲ့။ဗလီတွေ မနက်အစောကြီး အော်ပြီးရှစ်ခိုးနေတာကျတော့ကောတဲ့။
မဆိုင်တဲ့ အကြောင်းအရာနှစ်ခုကို တန်း မညှိစေချင်ပါဘူး။
အခုပြောတာ အလှူခံတာကို အဓိကဆိုလို တာမဟုတ်ဘဲ လော်သုံးတာကိုပြောနေ တာ ပါ။
ကျွန်တော်သာအမှတ်မမှားဘူးဆိုရင် ဒီကိစ္စဟာ အရေးအခင်းနောက်ပိုင်းမှ ပေါ်လာတာပါ။ကားလမ်းတွေပေါ်မှာ ကားဂိတ်တွေနားမှာ လော်တွေနဲ့အော် မောင်းထောင်ဂျိုင့်ထဲကျောက်ခဲထည့် ခလောက်ရင်း အဲ့ဒီရောဂါစတင်လာ တာပါပဲ။နောက်ပိုင်းအကျိုးရှိမှန်းသ်ိလာ တော့ ရပ်ကွက်တိုင်းလိုလို လိုက်လုပ်လာ တယ်။ဒါပေမယ့် ရပ်ကွက်အ၀ကားဂိတ် တွေ အနှေးယဉ်ဂိတ်တွေ လောက်ပဲ။အရပ်ထဲ လမ်းထဲမ၀င်ကြသေး ဘူး။နောက်ပိုင်းမှာမှ လမ်းထဲထိ ဓမ္မာရုံ ရှေ့တွေထိ ရောက်လာတာပါ။ဒါ လော်သမိုင်း အမှန်ပါ။
ကျွန်တော် မြန်မာပြည်နဲ့ပတ်သက်တဲ့ ကားလေးတစ်ကားရိုက်ဖို့စဉ်းစားတော့ အခွေထိုးလိုက်တာနဲ့ မြန်မာပြည်က ရိုက်မှန်း ကမ္ဘာက သိအောင် ဘာပြရမလဲတွေးနေတာတော်တော်ကြာပါပြီ။
အန္ဒိယကားတွေက သူတို့တီးလုံးနဲ့ မွန်ဘိုင်းက ကားကြပ်တဲ့လမ်းမ။ပိုက်ဆံတောင်းနေသူတွေပြလိုက်ရင် အိန္ဒိယကားမှန်း ကမ္ဘာကသိတယ်။ထိုင်းကလည်း ရေပေါ်ဈေးရောင်းနေတဲ့ လှေတွေပြလိုက်ရင် သိတယ်။ထိုင်ဝမ်ကတော့ ချိုင်းနားတောင်း က အခေါက်ကင်အသားကင်ဆိုင်တန်းတွေ လူရှုတ်နေတဲ့ လမ်းမတွေပြလိုက်ရင် သိတယ်။မြန်မာကို ရွှေတိဂုံနဲ့ပုဂံမပါဘဲ လမ်းပေါ်က လူတွေပြရုံနဲ့ ဗီယက်နမ်နဲ့မမှားအောင် မြန်မာမှန်းသိအောင် ဘယ်လိုပြရမလဲပေါ့။နောက်ဆုံးတော့ အဖြေပေါ်လာတယ်။NYဆိုရင် ရုပ်ရှင်ထဲ ရဲကားသံပါရသလို မြန်မာကကားဆိုရင်လည်း အလှူခံအသံ အလှူခံမဏ္ဏပ်တွေ ပါရမယ် လို့ သဘောပေါက်လာပါတယ်။
ဒါပေမယ့် ကမ္ဘာ့အမြင်မှာတော့ လော်တွေအသံကုန်ဖွင့်နေတာဟာ အများပြည်သူရဲ့ အေးချမ်းစွာနေပိုင်ခွင့်ကို ထိပါးနေတာဖြစ်လို့ ဂုဏ်ယူစရာ Image တော့ မဟုတ်ပါဘူး။
ဒါပေမယ့် ကျွန်တော်တို့သာ အချိန်မီ မပြင်ဆင်ရင် သိပ်မကြာခင်ရောက်လာတော့မယ့် နိုင်ငံတကာရုပ်ရှင်အဖွဲ့တွေက အဲ့ဒါကိုထည့်ရိုက်ကြပါလိမ့်မယ်။လွန်ခဲ့တဲ့ ၃ နှစ်လောက်က ဂျာမန်က သားအမိ၂ယောက်လာတော့ ယောက်ဖကအကူညီတောင်းလို့ ကျွန်တော်နဲ့ကျွန်တော့်အစ်ကိုလေဆိပ်မှာသွားကြိုပေးခဲ့ရဖူးတယ်။အမေက ဂျမဏီကဆရာမဖြစ်ပြီး သမီးကတော့ဘန်ကောက်မှာကျောင်းတက်နေ တာပါ။ရင်းနှီးသွားတော့ ရန်ကုန်နဲ့ပတ်သက်ပြီး သူတို့အမြင်ကိုမေးကြည့်တော့
bkkက ငနဲမက ဘာမှမပြောပေမယ့်ဂျာမဏီကလာတဲ့ အဘွားကြီးကတော့ (ဆူလွန်းတယ်)တဲ့ အားနာပါးနာမှတ်ချက်ချတယ်။ထပ်မေးတော့ နောက်တစ်ခွန်း ထပ်ပြောတယ်။(နည်းနည်းလည်းညစ်ပတ်တယ်)တဲ့။သေရောဗျာ။ကျွန်တော်က ခေတ်မှီဖွံ့ဖြိုးတိုးတက်တဲ့နိုင်ငံ ဘာညာ ကြားရ မလားထင်ပြီး မေးလိုက်မိတာ တော်တော်အရှက်ရသွားတယ်။ဒါကြောင့် ဟိုတလောကလာတဲ့ သူငယ်ချင်းရဲ့မိန်းမ စလုံးမ ကိုတော့ ရန်ကုန်အကြောင်း လုံးလုံးမမေးရဲတော့ဘူး။ဒါတောင် စာချုပ်စာတန်းမှတ်ပုံတင်ရုံးသွားတော့ အရာရှိခန်း ထဲက်ိုဖိနပ်ချွတ်ပြီးဝင်ခဲ့ရလို့တဲ့ ရိုက်လာတဲ့ဓာတ်ပုံတွေထုတ်ပြပြီး မကျေမနပ်ရင်ဖွင့် သွားသေးတယ်။(ဘုန်းကြီးကျောင်းမို့ ဖိနပ်ချွတ်ခိုင်း တာလား)တဲ့။
သူတို့နိုင်ငံခြားသားတွေက ညှပ်ဖိနပ်စီးတာ မဟုတ်လို့ ဘုရားမဟုတ်ဘဲ ဖိနပ်ချွတ်ခိုင်းရင် တော်တော်အဆင်မပြေဘူးကိုး။စည်မြောင်းလမ်း ကြားထဲက စာချုပ်ရုံးအရာရှိ ခန်းဝမှာ ဖိနပ်ချွတ်ဝင်ပါဆိုတဲ့ စာတမ်းဘာကြောင့်ရှိနေမှန်းတော့ ကျွန်တော်လည်း တကယ်မသိပါ။
ဘာပဲဖြစ်ဖြစ်လော်လှူခံတွေနဲ့ပတ်သက်ရင်လည်း နိုင်ငံခြားသားတွေအမြင်မှာ တိမ်းစောင်းသွားမှာတော့စိုးရိမ်ပါတယ်။Bkkက တုပ်တုပ်မောင်းသူတွေကိုဆိုရင် နိုင်ငံခြားသားတွေက အမြင်မကြည်ဘူး။ဒါကြောင့် သူတို့ရိုက်တဲ့ကားတွေထဲမှာ Bkkက ဗီလိန်ဆိုရင် ပက်ပုန်းကပွဲစားတို့ တုပ်တုပ်မောင်းတဲ့သူတို့ကို ပြတော့တာပဲ။
နိုင်ငံတကာအမြင်မှာ အဲ့လိုဖြစ်သွားပြီ ဆိုရင်တော့ ပြန်ဖျက်ဖို့တော်တော်ခက်သွားပါလိမ့်မယ်။ကျွန်တော်တို့ဆီက ရဲနဲ့လ၀က ကတော့ကံကောင်းထောက်မစွာ ဗီလိန်စာရင်းမှာရှေ့တန်းမရောက်သေးဘူး။
လော်လှူခံတွေကိုလည်းမကောင်းတဲ့ imageတစ်ခုဖြစ်မသွားစေချင်လို့ပြောရ တာပါ။
မြန်မာတွေရဲ့ ချစ်စရာကောင်းတဲ့ ဓလေ့စရိုက်တစ်ခုဟာ ကိုယ်ကျိုးရှာ အတ္တလွန်ကဲမှုကြောင့်ဖြစ်စေ။ လော်တွေကို တစုံတစ်ခုသော ရည်ရွယ်ချက်ကြောင့် အသုံးချချင်သူတွေကြောင့်ဖြစ်စေ။ နာမည်ပျက်သွားမှတော့ မလိုလားပါဘူး။
ကားတွေပေါ်မှာ Sound Box ကြီးတွေတင်ပြီး အလှူခံ
လှည့်ကြတာ ဒိန်းဒိန်း ဒိန်း
တုန်တယ် ကျမ တို့မှာလမ်းမ ဘေး နေ့စဉ်
ဆိုတာလေးပါ ရေးပါဦးဆရာ ”’
ကျွန်တော်တို့ငယ်ငယ်က အာစိန္တကံ၅ပြားအလှူဆိုတာရှိတယ်။နေ့တိုင်း၅ပြားဆီ လှူတာမျိုးပေါ။ရွှေတိဂုံပေါ်က ၂ပြားတန်စောင်းကလည်း အဲ့လို အလှူခံပြီးဆောက်တာပဲ။ဘာလော်မှမလိုဘူး လှူနေကျလူတွေရဲ့ အိမ်ရှေ့သွားရပ်ရင် ထည့်လိုက်ကြတာပဲ။
အသွေးအသားထဲကကို လှူချင်စ်ိတ်ပေါ်လာရင် အလှူခံရအောင်ရှာပြီးလိုက်လှူပါတယ်။လော်မလိုပါဘူး။
အာရပ်တိုင်းပြည်တွေမှာသူတို့ပိုင်ဆိုင်မှူရဲ့ ၅% လား ၁၀%လားမသ်ိဘူး တနှစ်တခါ လှူရမယ်လို့ ဘာသာတရားကပြဌာန်းထားတော့ တနှစ်တခါလှူကြတယ်။(အစ်တယ်ဆိုတာလည်းထိုသဘောပဲ။)
အာရပ်တွေရေနံနဲ့ ချမ်းသာလာတော့ အလှူခံမယ့်သူမရှိတော့ဘူး။ဒီအခါ ဆော်ဒီတို့ဘာတို့မှာ လှူမယ့်ငွေတွေကို လမ်းပေါ်မှာစွန့်တာတွေဖြစ်လာတယ်။
အစိုးရက သိတော့ ဒီလိုတော့မလုပ်ကြနဲ့ လှူချင်ရင်လာကြဆိုပြီး အကောင့်ဖွင့်ပေးလိုက်တယ်။
အဲ့ဒီက ရတဲ့ငွေကို နွမ်းပါးတဲ့ အစ္စလမ်တိုင်းပြည်တွေပြန်လှူသတဲ့။
ကျွန်တော်တို့ဘာသာမှာ အဲ့ဒီလိုသွေးထဲသားထဲက လှူချင်တဲ့ သဒ္ဓာ မျိုးအားနည်းလာတော့
တကယ်ကသဒ္ဓာတရားထက်သန်အောင် ဘာသာရေး အဆုံးအမနဲ့ လမ်းညွှန်ရမှာပါ။
ကိုယ့်ကျောင်းကိုယ့်ဒကာလောက်နဲ့ကျေနပ်မနေဘဲ။တချို့သောရဟန်းငယ်တွေ နိုင်ငံခြားကျောင်းသွား ထိုင်ဖို့လောက်သာ စဉ်းစားမနေဘဲ တိမ်းစောင်းနေတာတွေကို တည့်ပတ်ပေးရပါလိမ့်မယ်။ကျွန်တော်တို့လူမျိုးက ဘာသာရေးနဲ့ပြောရင် နားဝင်ပါတယ်။
ဟုတ်ပါတယ်ဆရာ ဘုရားရှစ်ခိုးတာ တရားနာတာ အလှုခံတာ ရပ်ကွက်ထဲမင်္ဂလာဆောင်တာ နောက်ဆုံးသိပ်နာလညိမှုနည်းတဲ့ယူဆသူတွေနာရေးမှာတောင် လော်တပ်ပြီးအသုံးပြုနေကြတတွေဟာ ပီတိ (သို့ )ကုသိုလ် ကိုမခံစားရဘဲ ဆူညံလွန်းမှုကြောင့် ဒေါသ (သို့ )အကုသိုလ် ဖြစ်ရတာများတာအမှန်ပါရှင်
ဆရာရဲ့ status အောက်မှာ ၀င်မ မန့် တာကြာပါပြီ ဒါပေမဲ့လဲ မနေနိုင်တယ့်အတွက် အခုတော ၀င်ရေးလိုက်ပြန်ပြီ ( အမှန်ပြောရင်ဒီလိုပဲ ဆရာရေ သမီးတို့ရပ်ကွက်ဆို ပိုဆိုးတယ် တနေ့ကို 15 ခုလောက်မက ဘူးလာတာ မျိုးစုံပဲ ကြားနေမြင်နေရတာ တလမ်းတည်းမှာတင်4ခုလောက်မဏပ် ရှိတယ် ) အဲဒီတော့ ဘယ်လိုပြောရမှန်းတောင်မသိဘူး ဆရာရေ
ကျွန်တော်ကဆရာ လော်ကိစ္စ ပြောတိုင်း ဆရာ့ ဘက်ကပဲနော် အလှူခံတာတော့ ခံပါ နေ့စဉ် ရက်ဆက်ဆိုတော့ ……..
ရပ်ကွက် ရုံးကို သွားတော့ မပြောနဲ့ ဆရာ ကျွန်တော် တစ်ခါ သွားဆွေးနွေးတာ နောက်နေ့ ကား အခြစ်ခံရပါရောလား …..
ကျွန်တော်တို့က သတ်သတ်မှတ်မှတ် လေးထားပြီး လုပ်စေချင်တာပါ ။ မှတ်ချက် –
ကျွန်တော် ဗုဒ္ဓ ဘာသာ ပါ။
ဘုရားရှင် မရှိတာ နာတယ်နော်
ငါ ဘု ရား ကို ဗန်းပြ ပြီး အလွန်အကျွန်တွေ မလုပ်ကြဖို့ပေါ့ ဆရာ
This entry was posted on October 29, 2014 at 9:36 am and is filed under Uncategorized.	You can follow any responses to this entry through the RSS 2.0 feed. You can leavearesponse, or trackback from your own site.